Finday sy Internet any Bali ~ Journey-Assist
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Serasera finday sy Internet any Bali
Finday sy Internet any Bali
Ahoana ny fomba hiantsoana an-trano avy any Bali
Ahoana ny fomba hiantsoana any Bali
Tarifa ho an'ny serasera finday any Bali
Nomery vonjy maika any Bali (Indonezia)
Ahoana ny fanamarinana ny fifandanjan'ny kaontinao finday any Bali
Mividiana karatra SIM any Bali
Topy kaonty finday any Bali
Internet ao Bali
Internet tariby any Bali
Telefaona mahasoa sy vonjy maika any Bali
Serasera finday any Bali: Fampahalalana ankapobeny
Mpampiasa finday ao Bali (Indonezia)
Telkomsel any Bali
Axiata any Bali
Tranonkala Ofisialy - https: //www.xl.co.id/
Indosat in bali
Indosat - manana fandrakofana azo itokisana ihany koa any Bali sy ireo nosy lehibe lehibe any Indonesia. Ampiasaina ankehitriny ny fonosana malalaka. Ny IM sy Mentari izay nampiasaina taloha dia kely kokoa.
Antso avy any Bali
Raha miantso an-trano avy any Bali amin'ny laharana fitaterana an-tanety, mila miantso ny laharana 001 ianao, avy eo miditra ny kaody ao amin'ny firenena, ny kaody sy ny laharan'ny tanàna.
Raha miantso nomerika Bali iray avy amin'ny sisin-tany any amin'ny firenena hafa, dia tsy maintsy miantso ny laharana faha-8, avy eo ny 10, 62, (kaody any Indonezia), 361 (kaody Bali), avy eo ny laharana an-telefaona.
Raha miantso avy amin'ny telefaona finday any amin'ny firenena hafa mankany amin'ny laharana finday any Bali ianao dia mila miantso +62 (kaody any Indonezia), avy eo ny kaody famantarana sy nomerao finday.
Nomery vonjy maika tany Indonesia (Bali)
Mpandoro afo - 113.
Aiza hividianana karatra SIM any Bali
Ny karatra SIM any Bali dia amidy any amin'ny toerana maro: fivarotana finday finday, supermarkets ary seranam-piaramanidina. Amin'ny toerana fizahan-tany, be dia be ny teboka amidy; Raha tsy amin'ny toe-javatra sarotra, aza maika dia mividy karatra SIM efa misy eny amin'ny seranam-piaramanidina, satria lafo be tokoa izany. Any amin'ny toeram-pivarotana lehibe dia kely ny vidiny.
Aiza ary ahoana ny fomba recharge kaonty finday any Bali
Ao amin'ny trano fivarotana amidy, karatra SIM, telefaona sy ny toy izany no amidy. Toy izany koa ny amin'ny fivarotana. Azonao atao ny mangataka amina vaomiera momba ny famerenam-bola.
Finday misy haingam-pandeha amin'ny Bali an-tserasera
Misy ihany koa ny habaka famerenana fifandanjalanjana:
Tsy voalaza ny mampiasa karatra SIM an'ny mpandraharaha finday tsy Indonezianina ho an'ny Internet finday any Indonezia, satria lafo be ny Internet. Ny vidiny dia mety hisy dikany. Azo atao ny mampifandray ny roaming amin'ny operator an-tranonao mba tsy hahatongavan-dry zareo, na izany aza, dia hihodina ho lafo lavitra noho ny fampiasana mpizahatany manokana na karatra SIM Indoneziana.
Na dia any amin'ny ankamaroan'ny firenena any atsimo atsinanana aza ny Internet dia mivoatra saika tsy misy tomika ary misy Wi-Fi ao amin'ny hotely tsirairay, tsy dia miserana ihany ny toe-javatra any Indonezia. Ny Wi-Fi eto amin'ity firenena ity dia tsy misy idirana mihitsy ao amin'ny hotely, na any amin'ny faritra mpizahatany malaza toa an'i Bali aza. Noho izany dia tokony hofidinao tsara ny hotely. Saingy, raha mila Internet finday ihany ianao dia afaka mametra ny tenanao amin'ny fividianana karatra SIM miaraka amin'ny fifamoivoizana finday. Misy Wi-Fi ihany koa azo alaina any amin'ny sasany (fa tsy ny rehetra) trano fisakafoanana, kafe, ary trano fivarotana lehibe. Misy kafe amin'ny Internet any Bali.
Internet finday any Bali ho an'ny mpizahatany
Telkom Speedy Bali dia manome cabling miorina ADSL. Ny fatiantoka dia ny fampiasana tariby an-tariby, izay tsy nohavaozina tao Bali nandritra ny fotoana ela, noho izany dia manana bandwidth ambany ary matetika tapaka.Tamin'ny ankamaroan'ny tranga, raha mila Internet misafidy avo lenta ianao dia tokony ho safidy tsara kokoa noho ny tariby. Saingy mazava ho azy dia tsara kokoa ny hanamarina eny an-toerana.
13.07.2019 / fanehoan-kevitra eo amin'ny balaonina tsy misy
Efa ho iray volana izao izahay no tonga tao Bali nefa tsy nifandray tamin'ny finday. Afa-po amin'ny wi-fi ao amin'ny hotely ary misintona ny sarintany an-tserasera. Ary dia nitety ny nosy manontolo. Ary tena nahafinaritra mihitsy aza ny hoe "mpamono" tsy misy an-tserasera 🙂
Misaotra amin'ny fanazavana mahasoa!
Nampiasa azy io izahay ary nanamafy ny maha azo atokisana azy.